” သားသမီးနှစ်ယောက်နဲ့အတူ မိသားစုစုံစုံလင်လင်နဲ့ဘေးကင်းရာကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့်စစ်ကောင်စီကြောင့်သားသမီးတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မိဘတွေအတွက်ဖြေမဆည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သန္တာလှိုင်” – myannewsmedia.com
” သားသမီးနှစ်ယောက်နဲ့အတူ မိသားစုစုံစုံလင်လင်နဲ့ဘေးကင်းရာကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပေမယ့်စစ်ကောင်စီကြောင့်သားသမီးတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မိဘတွေအတွက်ဖြေမဆည်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သန္တာလှိုင်”
CeleChitThu ပရိသတ်ကြီးရေ သန္တာလှိုင် ကတော့ အာဏာစသိမ်းကတည်းက ပြည်သူဘက်မှာပါဝင်ကာ ဆန္ဒပြမှုတွေမှာ အင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပုဒ်မ၅၀၅(က)ဖြင့် တရားစွဲခံခဲ့ရကာ အချိန်တော်တော်ကြာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့တာပါ။ ဒါ့အပြင် တရားစွဲဆိုတာတွေကျေအေးအပြီးနောက် ရန်ကုန်​ေလဆိပ်မှာ သူမအား စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားကာ စစ်ကြောရေးထိရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
နောက်ပိုင်းပြန်လည်လွတ်မြောက်လာကြောင်းကိုလာ်းပရိသတ်တွေသိအောင်ပြောပြခဲ့ပြီးနောက် ဒီနေ့မှာတော့ ”ဒိလိုသားမျိုးကို သားကို ဘယ်အမေက မကြွေဘဲ နေမလဲ….? ဘဝတစ်ကွေ့ချိုးမှာ ပျော်ရာနေရာက်ိုစွန့်ပြီး တော်ရာကနေပဲ စလုံးရေက ပြန်စရမှာပါ၊ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ သားနဲ့ သမီးရောနဲ့ မိသားစု စုံစုံလင်လင် ပြန်စရတဲ့ အတွက် ဒီနေရာအထိရောက်အောင် ကူညီပေးခဲတဲ့သူတွေအားလုံးကိုရော စိတ်ပူပေးကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုပါ အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သားကိုဖက်ပြီး နမ်းလိုက်တိုင်း အိမ်မပြန်လာနိုင်တော့တဲ့ သားသမီးတွေကို မျော်နေမယ့် မိဘတွေ့၊ သားသမီးတွေ စွန့်လွတ်လိုက်ရတဲ့ မိဘတွေရဲ့ ရင်ထဲကခံစားမှူကို ဖျောက်လို့မရဘူး၊ ရင်ထဲမှာ နင့်နေတုန်းပါ။ ဘယ်တော့မှ မမေ့ပါဘူး။အားလုံးကို သတိရနေပါတယ် ….”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ သားလေးရဲ့ချစ်စရာ​ေကာင်းတဲ့အမောပြေကြိုဆိုမှုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတင်လာခဲ့တာပါ။
” သားသမီးႏွစ္ေယာက္နဲ႔အတူ မိသားစုစုံစုံလင္လင္နဲ႔ေဘးကင္းရာကိုေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေပမယ့္စစ္ေကာင္စီေၾကာင့္သားသမီးေတြဆုံးရႈံးခဲ့ရတဲ့မိဘေတြအတြက္ေျဖမဆည္ႏိုင္ဘူးဆိုတဲ့သႏၲာလႈိင္”
CeleChitThu ပရိသတ္ႀကီးေရ သႏၲာလႈိင္ ကေတာ့ အာဏာစသိမ္းကတည္းက ျပည္သူဘက္မွာပါဝင္ကာ ဆႏၵျပမႈေတြမွာ အင္တိုက္အားတိုက္ပါဝင္ခဲ့တာေၾကာင့္ပုဒ္မ၅၀၅(က)ျဖင့္ တရားစြဲခံခဲ့ရကာ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ၾကာ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့တာပါ။ ဒါ့အျပင္ တရားစြဲဆိုတာေတြေက်ေအးအၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္​ေလဆိပ္မွာ သူမအား စစ္ေကာင္စီကဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားကာ စစ္ေၾကာေရးထိေရာက္ရွိခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။
ေနာက္ပိုင္းျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေၾကာင္းကိုလာ္းပရိသတ္ေတြသိေအာင္ေျပာျပခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒီေန႔မွာေတာ့ ”ဒိလိုသားမ်ိဳးကို သားကို ဘယ္အေမက မေႂကြဘဲ ေနမလဲ….? ဘဝတစ္ေကြ႕ခ်ိဳးမွာ ေပ်ာ္ရာေနရာက္ိုစြန္႔ၿပီး ေတာ္ရာကေနပဲ စလုံးေရက ျပန္စရမွာပါ၊ ဒါေပမယ့္ ဒီတစ္ခါေတာ့ သားနဲ႔ သမီးေရာနဲ႔ မိသားစု စုံစုံလင္လင္ ျပန္စရတဲ့ အတြက္ ဒီေနရာအထိေရာက္ေအာင္ ကူညီေပးခဲတဲ့သူေတြအားလုံးကိုေရာ စိတ္ပူေပးၾကတဲ့သူေတြအားလုံးကိုပါ အရမ္းကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
သားကိုဖက္ၿပီး နမ္းလိုက္တိုင္း အိမ္မျပန္လာႏိုင္ေတာ့တဲ့ သားသမီးေတြကို ေမ်ာ္ေနမယ့္ မိဘေတြ႕၊ သားသမီးေတြ စြန္႔လြတ္လိုက္ရတဲ့ မိဘေတြရဲ႕ ရင္ထဲကခံစားမႉကို ေဖ်ာက္လို႔မရဘူး၊ ရင္ထဲမွာ နင့္ေနတုန္းပါ။ ဘယ္ေတာ့မွ မေမ့ပါဘူး။အားလုံးကို သတိရေနပါတယ္ ….”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ သူမရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမွာ သားေလးရဲ႕ခ်စ္စရာ​ေကာင္းတဲ့အေမာေျပႀကိဳဆိုမႈဗီဒီယိုဖိုင္ေလးကိုတင္လာခဲ့တာပါ။
← ” သူ့အား နာမည်ဖျက်ကာ သတင်းတွေတင်နေတဲ့ CeleSpySmall pageပိုင်ရှင်ဟာ သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးဖြစ်နေကာ နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးခံခဲ့ရတဲ့အချက်အလက်တွေကိုသက်သေနဲ့တကွထုတ်ပြလာတဲ့ အုပ်စိုးခန့်”
” ရက်စက်မှူ မညီမျှမှူ ကိုယ်ချင်းစာမှူမရှိတဲ့ စသ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်ကာ ပြည်သူတွေဘက်မှာရပ်တည်နေပါတယ်ဆိုတဲ့အိုင်းရင်းဇင်မာမြင့်” →